Feiliyundi Isikhungo Sokuthengisa - Umagazini Design
Isikhungo Sokuthengisa Umsebenzi omuhle wokuqamba uvusa imizwa yabantu. Umqambi ugxumela ngaphandle kwenkumbulo yesitayela sendabuko futhi ubeka okuhlangenwe nakho okusha kusakhiwo sendawo enhle nesizayo. Ihholo lesipiliyoni sokucwaswa kwemvelo lakhiwa ngokufakwa ngokucophelela kokufakwa kobuciko, ukuhamba okucacile kwendawo nendawo yokuhlobisa edwetshwe ngezinto nemibala. Ukuba kuyo akukhona ukubuyela emvelweni kuphela, kodwa futhi nohambo oluzuzisayo.
Igama lephrojekthi : Feiliyundi, Igama labaklami : Weimo Feng, Igama leklayenti : MOD.
Isikhungo Sokuthengisa Weimo Feng Feiliyundi